Prose | လမ်းအိုလေး
မိုးကုန်​ပြီးစ တစ်​​နေ့၌ ​ကျေနပ်​စွာ လွမ်းဆွတ်​ရခြင်း (မြင့်သန်း)
ကျွန်​​တော်​သည်​ ကန်​​ရေပြင်​ကို ​ငေး​နေရင်း လက်​ထဲတွင်​ ပိုက်​ထား​သော ​ဟောလစ်​ပုလင်းကြီး အလွတ်​တစ်​လုံးကို သတိရလိုက်​မိသည်​။ ထိုပုလင်းမှာ အစ်​ကို​လေးက ကျွန်​​တော့်​ကို ​ပေးထား​သော ပုလင်းကြီး ဖြစ်​သည်​။ ကျွန်​​တော်​တို့ ငယ်​စဉ်​က ​ပျော်​စရာ​ကောင်း​သောအခါ ​ပျော်​စရာ​ကောင်း​သော အ​ကြောင်းများ ရှိခဲ့​လေတိုင်း အစ်​ကို​လေးသည်​ “​ပျော်​ရွှင်​စရာ​တွေ နည်းနည်း သိမ်းထားဦးမယ်​” ဟုဆိုကာ ထို​ဟောလစ်​ပုလင်းကြီးထဲတွင်​ သိမ်း​လေ့ရှိသည်​။
Categories: Prose, Short Stories | Tags: မြင့်သန်း, ၀တ္ထုတို, Myint Than, Short Stories | Permalink.
ဝမ်းနည်းရခြင်းများသည် မဖိတ်ခေါ်ပဲ ရောက်လာသော ဧည့်သည်ဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းရခြင်းများသည် ခေါင်းလောင်းသံလို ကျယ်လောင်စွာ မြည်ဟီးနေခဲ့သည်။ ဝမ်းနည်းရခြင်းများသည် ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကလေးထဲမှ ထောင့်ကွေး သေးသေးလေးပါမကျန် အပ်နဖားပေါက်ကလေးထဲအထိ ပျံ့နှံ့ရောက်ရှိလာသည်။ သို့သော်လည်း ဤစာပိုဒ်၏ ခေါင်းစဉ်ကို ကျွန်တော် ဤသို့ပေးနိုင်ခဲ့သည် ‘ဝမ်းမနည်းကြေး’။
Categories: Essays, Prose | Tags: ညီမလေးဖျားတုန်းက, နေမျိုး, Essay, nay myo, when my sister was sick | Permalink.
နာကျင်မှုမှတ်တမ်းမှ နောက်ဆုံးစာမျက်နှာ (နေမျိုး)
ပူပြင်းသော ဘဝရဲ့ လမ်းမကြီးထက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ဆုံကြပါစို့။
ကျွန်တော်လည်း အိပ်ရာပေါ်မှာ ကျောဆန့်လိုက်ပြီး လိုက်ကာကတစ်ဆင့် လကို ကြည့်နေမိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘယ်ကို ဦးတည်နေကြသလဲ ကျွန်တော် တွေးနေမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုကိစ္စမျိုးကို လေးလေးနက်နက် တွေးဖို့ ကျွန်တော့်မှာ သိပ်ကို မောပန်းနေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော် မျက်စိနှစ်လုံးကို မှိတ်လိုက်တဲ့အခါ အိပ်စက်ခြင်းက မှောင်မိုက်​တိတ်ဆိတ်တဲ့ ခြင်ထောင်လို ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ လွင့်ကျလာခဲ့တော့တယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ မူယာကာမိဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီက ဘာသာပြန်ဆရာ တော်တော်များများရဲ့ လက်စွဲဖြစ်လာသလို သူ့ဝတ္ထုတိုတွေကို ပြန်ဆိုထားကြတဲ့ ဘာသာပြန်လက်ရာ မူကွဲအမျိုးမျိုးကိုလဲ ဖတ်ရှုလာရပါတယ်။ ဒီတော့ ပြန်ချင်သူများလှတဲ့ မူယာကာမိ ဝတ္ထုတွေကို လက်ရှောင်ပြီး သူများ ပြန်ပြီးသားတွေကိုပဲ ဖတ်နေမိပါတယ်။ ကိုယ်ပြန်ထားတဲ့ ဝတ္ထုတွေ သူများတကာ ဘယ်လိုများ ပြန်ထားသလဲ ဖတ်ကြည့်ရင်း ဘာသာပြန်ခြင်း အနုပညာကို ရိပ်စား​နားလည်လာရပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကိုယ်ပြန်ဆိုထားတဲ့ လက်ရာကို စာဖတ်သူများကို ချပြချင်စိတ်တွေလည်း တဖွားဖွား ပေါ်လာမိပါတယ်။ မတူကွဲပြားတဲ့ ဘာသာပြန်မူတွေကို နှိုင်းယှဉ်​ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့် စာဖတ်သူများကို အကဲဖြတ်စေချင်တဲ့ စိတ်စေတနာလည်း ပါပါတယ်။
Categories: Prose, Short Stories | Tags: ဒီနိုဗို, ဘာသာပြန်, ဟာရူကီ မူရာကာမီ, ၀တ္ထုတို, Denovo, Haruki Murakami, lanolay, Short Stories, the-elephant-vanishes-translated-by-denovo | Permalink.
လှပသော ဧပရယ်မနက်ခင်းတစ်ခုတွင် ၁၀၀ရာနှုန်း ပြည့်စုံသော ကောင်မလေး​ တစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရခြင်း (ဒီနိုဗို)
On seeing the 100% perfect girl …
စကားတစ်လုံးမှ မပြောပဲ သူတို့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကျော်ဖြတ်လာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ လူအုပ်ထဲ ဝင်ရောက်​ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ ထာဝရပဲ။ ဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပဲ၊ အဲဒီလို မထင်မိဘူးလား။
Facebook မှာ ဓာတ်ပုံတွေ့တယ် (ရဲမြင့်သူ)
(မြင်းရုပ်ချားရဟတ်တွေလည်ရင်း သမိုင်းဟာ ကုန်လွန်ရင်း – ရဲမြင့်သူ။ စက်တင်ဘာ – ၂၀၁၂။ နှစ်ကာလများ )
Categories: Kabyarz, Prose | Tags: ရဲမြင့်သူ, Kabyarz, prose poetry, ye myint thu | Permalink.
ဟာလာဟင်းလင်းသည် ခုချိန်ခါများ (ရဲမြင့်သူ)
တိရစ္ဆာန်ရုံ သေဆုံးခြင်း (တေဇာ – လရောင်လမ်း)
သူတို့ ကျားသစ်တွေကို သတ်ကြတယ်။ သူတို့ ၀ံပုလွေတွေကို သတ်ကြတယ်။ သူတို့ ၀က်ဝံတွေကို သတ်ကြတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ အချိန်အများဆုံး ယူရတာက ၀က်ဝံတွေကို ပစ်သတ်ဖို့ပဲ။ ရိုင်ဖယ်ကျည်ဆန်တွေ ဒါဇင်ကျော်ထိပြီးတာတောင်မှ ကြီးမားလှတဲ့ တိရစ္ဆာန်ကြီးနှစ်ကောင်ဟာ သံလှောင်အိမ်က ဘားတန်းတွေကို တွန်းတိုက်နေကြတယ်။ စစ်သားတွေကို ဒေါသတကြီး ဟိန်းဟောက်အော်မြည်နေတယ်။ သွားရည်တမြားမြားနဲ့ အစွယ်ကြီးတွေကို ဖြဲပြနေကြတယ်။ ဒါက ကြောင်မျိုးနွယ်တွေနဲ့တော့ သိပ်မတူဘူး။ ကြောင်တွေကတော့ သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကို ပိုပြီး အသာတကြည် လက်ခံနိုင်တယ်လို့ပဲ ဆိုရမယ်။ (အနည်းဆုံးအားဖြင့်တော့ အဲဒီလို ပုံပေါက်နေတာပဲ) ၀က်ဝံတွေကတော့ ဒီလို မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ အသတ်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို သူတို့မှာ နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေရပုံပဲ။